Filed underGurmaa insa caasaa haaraa
Author Mugul 28.10.2020 28.10.2020 Comments
Caffeen Oromiyaa kaleessa yaa'ii ariifachiisaa waamuun labsiiwwan shanii fi muudamoota garaagaraa irratti mari'achuun raggaasise. Yaa'ichi akka ariifatu kan taasise inni jalqabaa aangoo fi gahee hojii qaama raawwachiistuu irra deebiin gurmeessuuf akka tahe, Obbo Habtaamuu Damissee, daarikterri Dhimmoota Komunikeeshinii fi Bulchiinsa Odeeffannoo Caffee Oromiyaa himaniiru.
Mootummaan kanaan dura gurmaa'ina labsicha irra deebiin ilaaluun hammam bu'a qabeessadha jedhee osoo hin ilaaliin turuunsaa rakkoo gurguddaa fideera kan jedhan Obbo Habtaamuun, kanaaf mootummaan irra deebiin qorannoo gaggeessee fooyyessuuf murtesseera jedhan. Humni namaa naannoo irraa hanga aanaatti jiru beekumsaa fi dandeettii ittiin uummatta tajaajiluu danda'u qabaatus, haala gurmaa'insa kanaan duraan bu'aa barbaadamu buusaa akka hin turres eeraniiru.
Kanarraa kan ka'e haala gurmaa'insa labsichaa jijjiiruun gara uummata keenyaatti gadi bu'uun hojjechuun bifa danda'amuun irra deebiin gurmaa'uu himaniiru. Mohaammad Adamoo daariktera OBN tahuun muudaman. Yaa'ii Caffee Oromiyaa irratti labsiin ilaalame biraa kan labsii abbaa alangaa akka tahe Obbo Habtaamuun dubbachuun ,abbaan alangaa manneen hojii gargaraa keessa faffaca'anii hojjetaa turanis karaa qindaa'aa taheen miti jedhan.
Amma dhimmi kun qoratamuun karaa mirga namoomaa kabajuu danda'uun fi qindaa'aa taheen akka hojjetuuf irra deebiin fooyya'eera jedhan.
Labsiiwwan yaa'ichaan fooyya'an biroon ammoo gurmaa'ina mana Murtii Oromiyaa fi abbootii seeraa irratti kan xiyyeeffate akka tahe himaniiru. Labsiin hojjetoota mootummaas yaa'ii caffee kanaa irratti qoratamee kan mirkanaa'e yoo tahu, gahee fi aangoon manneetii hojii garaagaraa walirra bu'uun danqaa tahaa turanis akka hiikaman tahaniiru jedhan, Obbo Habtaamuun.
Walumaagalatti gara uummataatti gadi bu'uun haala tajaajiluun danda'amu irratti xiyyeefachuun labsiiwwan kunneen akka fooyya'an ibsaniiru.
Muudamoota ragga'an ilaalchisee namootni amma muudaman bakka amma barbaadaman kanatti jijjirama guddaa fidu jedhamee waan itti amanameefi jedhan. Dabalataan namootni tokko tokko bakka kanaan dura muudaman irratti bu'aa barbaachisu waan hin fidneef, akka kaafamanii fi kaanis yeroo gabaabaa keessatti bakki isaanii jijjiramee muudamuun, bakka turanitti bu'aa gaarii fiduun bakka amma barbaadamanittis ni hojjetu jedhamee waan amanameefi jedhan Obbo Habtaamuun.
Oduu Itoophiyaa Viidiyoo Jajjaboo. Caffeen Oromiyaa kaleessa yaa'ii ariifachiisaa waamuun murtoowwanii fi muudama garagaraa mirkanneesse 9 Onkololeessa Labsii kana keessatti aangoo fi gaheen qaama hojii raawwachiistuu ifatti lafa taa'uu himaniiru. Imala muuxachuu DhDUO Mohaammad Adamoo daariktera OBN tahuun muudaman ''Tarsiimoo keenya galmaan gahuuf tooftaa fayyadamnedha'' Labsiiwwan biroo Yaa'ii Caffee Oromiyaa irratti labsiin ilaalame biraa kan labsii abbaa alangaa akka tahe Obbo Habtaamuun dubbachuun ,abbaan alangaa manneen hojii gargaraa keessa faffaca'anii hojjetaa turanis karaa qindaa'aa taheen miti jedhan.
Qaala’iinsi gabaa namtolcheen ummata boochise, gurmaa’ina caasaa haaraa dirqisiise
Odeessa kana irratti dabalata. Caffeen Oromiyaa muudama haaraa garaagaraa raggaasise. Lammaa Magarsaa: ''Injifannoon argame kan aarsaa lammiileetiin dhufeedha''.
Tarsiimoo keenya galmaan gahuuf tooftaa fayyadmaneedha: Obbo Lammaa. Isin hin darbiin.Labsii Mootummaa Naannoo Oromiyaa bifa haaraan bara qaamota raawwachiiftuu hundeessudhaaf bahe lakk. Waajjirichi aangoo fi gahee hojii kennameef kana bahachuuf waggoota darban qaamota komii ummataa keessummeessan bifa adda addaatiin gurmeessee furmaata laachuuf yaalii hedduu gochaa tureera.
Damee Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataa. Duudhaalee Ijoo. Waa'ee Keenya. Nuu Qunammaa. Addaa fi Turiiziimii. Biroo Fayyaa. Inverstimeentii Oro. Humna Namaa Iyyannoo fi Koommii Ummattaa. Finfinneetti ijaarsi piroojaktoota daandii haaraa 16 olii jalqabamuufi - Friday, 12 January Agarsiisni abaaboo, fudraa fi mudraa idil addunyaa Finfinneetti gaggee - Friday, 12 January Finfinneetti bara kana manneen waliin jireenyaa kuma 52 fi xumuruu - Wednesday, 27 December Ityoophiyaatti proojaktiin dandamannaa hongee horsiisee bulaa Birriin - Tuesday, 26 December Lammiikoof nan fiigan dabarfame - Monday, 25 December Bulchiinsi Magaalaa Adaamaa adda-babayiiwwanii fi daandiiwwan magaalat - Sunday, 24 December Ragaa iyyata yookiin komii dhiyaate qulqulleessuuf barbaachisu qaama Mootumma kamiyyuu gaafatanii argachuu fi sanadoota adda addaa fudhatanii qorachuuf aangoo ni qabaata.
Hawaasaaf haala iyyannoo fi komiin ittiin dhiyaatu ilaalchisee hubannoo kennu irratti qaama dhimmi ilaalu wajjin ni hojjeta. Qaamolee Mootummaa fi Miti-Mootummaa bulchiinsa gaarii dhugoomsuuf sirna dimokraasii dagaagsuuf hojjatan waliin qindoominan ni hojjata. Bulchiinsi gaariin haala qabatamaa Naannootiin hojiirra akka oolu ni taasisa, hojiirra oolmaa isaa ni hordofa, ni deeggara. Mana Hojii Mootummaa sadarkaan argamu keessatti bulchiinsa gaarii dhugoomsuu sirna danddeessisu diriiruu isaa ni mirkaneessa.
Raawwii hojii caasaalee Dhimmoota Bulchiinsaa, Iyyannoo fi Komii Ummataa sadarkaa sadarkaan jiran ni hordofa, ni deeggara. Bulchiinsa gaarii mirkaneessu fi iyyannoo fi komii ummataa hiikuu irratti dhaabbilee fi waldaalee hawaasaa waliin qindoominaan ni hojjeta.
More Articles Waa'ee Keenya 1. Mul'ata 2. Ergama 3. Duudhaalee Ijoo 4. Waa'ee Keenya 5. ORTO 2. FANA 3. ERTA 4. ENA 5. AMBO 2. ADAMA 3. Google 2. Yahoo 3. Facebook 4. Twitter 5. Addaa fi Turiiziimii 3.Jijjiirama gama siyaasaatiin dhufeen qofa ummanni sadarkaan j Gurmaa'insi haaraa kunis jijjiirama bu'uraa manneen hojii mootummaa keessatti fiduuf kaayyeeffatamee kan hojjetamaa jiru yoo ta'u qabeenya mootummaafi um,mataa qisaasama malee fayyadamuun ummanni dhiyeenyaan tajaajila si'ataafi wayitaawaa ta'e akka argatu taasisuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa jiraachusaas hoogganaan biirichaa ibsaniiru.
Kabajni kabajaa hundaa caaluu Ilaalchaafi miira qajeellummaan ummata tajajiluudha. Ragaa barnootaa sobaan walqabatee hojiin hojjetamaa ture gaarii ta'uufi hanga ammaatti hojjettoota kuma 15 ta'antu saaxilamee jira kan jedhan Hoog. Biqilaa Hurrisaa dhimmi ragaa sobaa itti fufiinsaan kan raawwatamu ta'uu ibsan.
Kana keessatti gaheen Miseensota Caffee olaanaa ta'uu ibsan. Biqilaan ibsaniiru. Obbo Isheetuu Dassees Labsii Lak. Gurma'insa Haaraa Biiroo Pabliik sarviisi fi Misooma Namaa Oromiyaa Qorachaa jiru ilaalchisee fuula FB Biiroo irraatti gad-dhifame irratti gaaffii baayeen keessaan karaa inbox nuuf ergitaan ilaalee yeroo gababaatti ibsi kan itti kennamu fi yaada isiin nuf gummachittaan bu'uraa godhachuun dhimmoonni sirrefama barbaddaan yoo jiratan kan ilaalamu ta'a.
Akkasumaas maqaan waajjiralee murasa sadarkaa magaala keessaa hin jiru jettaani gaafatan fkn waajjiraa barnoota kan jiru waan ta'e karaa kanaan sirrefaama jiru akka ubbatamu barbana. Caasaa Sadarkaa Ganda Baadiyyaa 1. Waajjira Bulchiinsa Gandaa 2.
Qindeessaa Misooma Barnootaa Daarektara Tokko 5. Qindeessaa Eggumsa Fayyaa ogeesa Ekis. Faayya 6. Qindeessaa Dhimma Nageenyaa Hawaasa Keessaa 7. Qindeesaa Dhimma Dubartootaa fi dargagoota Hawaasa Keessaa. Caasaa Sadarkaa Ganda Magaalaa 1. Waajjira Mana Qopheessaa 3. Deeskii Pabliik Sarvisiisii 4. Deeskii Galmeesa ragaalee bu'uuraa Deeskii Bulchiinsa fi ittifayyadama lafa Magaalaa 6.
Deeskii Gliiwwanii 7. Deeskii Bulchiinsa fi Nageenyaa 9. Deeskii Daldalaa fi Misooma Gabaa Deeskii Tajaajila Bishaan Dhugaatii Deeskii Tajaajila eegumsa Faayyaa Deeskii Qindeesa Dhimma Barnootaa Deskii qindeesaa dhimma Dubartootaa fi dargagootaa.
Sadarkaa Magaalaa 1. Waajjira Kantiibaa 2.Labsii Qaamolee Raawwachiiftuu Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromyaa Irra Deebiuun Gurmeessuufi Aangoofi Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe Karoora guddinaa fi tiraansifoormeeshinii gama dinagdee, hawaasummaa fi siyaasaa karaa milkaaina qabuun hoijirra oolchuun ceumsa transformation kutaa dinagdee fi bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf qaama raawwachiiftuu Naannichaa irra deebiuun bifa haarawaan gurmeessuun barbaachisaa taee waan argameef; Akkaataa Heera Mootummaa Naannichaa Fooyyaee Bahe, Labsii Lak.
Manneen Hojii Biroo jechuun, labsii kanaa fi seerota birootiin kan dhaabbatan Biirolee, Waajjiraalee, Abbaa Taayitaa, Ejansoota, Koomishinota, Inisitiiyutota, Interpraayizoota, Dhaabbatootaa fi qaamolee raawwachiiftuu kana fakkaatan ni dabalata. Ibsa Saalaa. Imaammatoota, tarsiimoowwanii fi seerota Mootummaa kan Hojirra oolchuu fi Hojiilee Bulchiinsaa kan raawwatu, qaamni raawwachiiftuu gurmaainsa armaan gadii ni qabaata:. Qaamni Raawachiiftuu kamiiyyuu akkuma gosaa fi baayina hojii isaatiin Manneen Hojii, dameewwanii fi Adeemsoota Hojii adda addaa qabaachuu ni dandaa.
Keewwata kana Keewwata Xiqqaa 2 jalatti kan tumame akkuma eegametti taee, hojii wal-fakkaatu kan raawwatan yoo taan qaamoleen raawaachiiftuu hojjettoota deeggarsaa fi tajaajila adda addaa waliin fayyadamuu ni dandau. Mudamaa fi Ittiwaamama.
Miseensonni Mana Maree sadarkaa kamittuu argamanu hundi, miseensummaa isaaniitiin murtee kennaniif ittigaafatamummaa waliinii ni qabaatu. Aangoo fi Hojii Itti Aanaa Pireezidaantii. Hojiiwwan dhimma maayikroo fi xixiqqaa ilaallatan irratti kallattiidhaan xiyyeeffachuun ni hojjata. Hooggantoota Biiroolee Labsii kanan Keewwata 12 Keewwata Xiqqaa 1 jalatti tarreeffaman gaggeessan.
Kan Keewwata kana Keewwata Xiqqaa 1 c fi d jalatti ibsaman, walgaii Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannchaa irratti argamuu yoo hin dandeenye, itti aantota isaaniitiin ykn Itti antota tokko ol yoo taan ifatti adda baee Itti Aanaa bakka buuummaan keennameefiin bakka buamuu ni dandau.
Ila tali gabadh Somaliyed oo donaysa nin ajahanba inay guursato
Bakka buummaan yoo ifaan hin kennamne Itti Aanaan yeroo mudamaa dursee muudame walgaicha irratti ni hirmaata. Keewwata kana Keewwata Xiqqaa 1 jalatti kan tumame yoo jiraateeyyuu, Manni Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa lakkoofsa miseensota isaa akka barbaachisummaa isaatti dabaluu ykn hirsuu ni dandaa. Murtiin darbu sagalee caalmaadhaan taa; yammuu sagaleen walqixa tau, yaadni Pireezidaantichaan deeggarame murtee Mana Marichaa taa.
Mirgi ajandaa qabasiisuu miseensota Mana Marichaa akkuma eegameetti taee, dhimmoota ajandaan dhiyaachuu qaban ni murteessa. Dhimmootni ajandaadhaan dhiyaatan Koree Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaatiin ilaalamuu kan qaban taee yoo argame, walgaicha yeroo biraaf ni dabarsa. Manni Marichaa, aangoo fi hojii isaa haalaan bahuu akka isa dandeessisu Koree Dhaabbataa ykn Koree Yeroo, miseensota Mana Marichaa kan of-keessaa qabu hundeessuu fi qabaachuu ni dandaa.
Aangoo fi Hojiilee labsii kanaa fi akkuma haala isaatti seeroota birootiin kennamaniif Hojirra oolchuudhaaf kan gargaaran imaammatoota, tarsiimoo fi sagantaalee Mootummaa Naannichaa ni burqisiisa, yammuu hayyamamus Hojirra ni olcha.For Amharic Version Click Here.
Hanga ammaattis QBOn oduu duraa akka tahetti jira. Galatni kan qabsaawotaa fi sabboontotaa haa tahu! Humnaanis jiraate. Wareegama baasaniinis caasaa dhaabaa fi dargaggoo tikfatanii jiran. Foolleen ummata irratti osoo hin taane, ummataaf ijaarama. Ammas taanaan dalagaa diiggaa itti jiran irraa of qusatuu diduun ummata keenyaaf dhimmaa fakkaatuun ergaa diinaa dabarsuu itti fufanii waan jiraniif, ummatni keenya biyya keessaa fi alaa of irraa tiksuu qofa osoo hin taane, akka akeeka isaanii maseensuu irratti jabinaan hojjatu ABOn hubachiisa.
ABOn jaarmayaa siyaasaa Oromoos tahe kan alagaa ijaaramuu irraa mormii ykn jibbiinsa hin qabu. Qabaatees hin beeku. Ijaaramuun mirga. ABO dhabamsiisuu dhaan gaaffii ummata Oromoo ukkaamsuu akeeka jedhuun masakamu.
ABO fi qabsoon bilisummaa ummatni Oromoo irratti wareegamaa jiran isaan biratti mirga dimokraasii osoo hin taane, kan biyya diiguu ti. ABOn jaarmayoota kamiifuu mirga isaanii kabajee osoo jiruu kan ABO kabajuu dhabuun irratti ololuu fi dhabamsiisuuf shiruun ammattis tahe fuula duratti furmaata argamsiisu hin qabu. Ummatni kamiyyuu hacuuccaa fi saaminsa jalaa walaba tahuu barbaada.
Qabeenya isaa irratti ajajaa tahuun fedhii fi mirga ummata hundaa ti. Jijjiirama xixiqqaa wayta qabsoo ummatootaan sardamutti fudhatuun mirgi ummatootaa kan kabajame fakkeessee lallabuun cunqursaa fi ukkaamsaa itti fufuun murtii Wayyaanee akka tahetti jira.
Kana irraas miidhaan dhaqqabu dabalaa akka jiru, duranaafis hammaataa kan deemu tahuun hin shakkisiisu. Addatti ammoo ummata Oromoo irratti xiyyeeffatuun karoorri baafame gara sadarkaa ol aanaatti kan cehu tahuu gochaan itti jiru mamiin alatti mirkaneessa. Kanaaf QBO sadarkaa amansiisaa irra gahee jiru fiixa baasuuf jabinaan hojjatuun dirqama qabaawotaa fi ummata keenyaa ti. Filmaata biraas hin qabnu. Diinni ummata Oromoo hanga aangoo irraa hin maqsamnetti QBO dura dhaabbatuu itti fufa.
Karoora ummata Oromoo cunqursaa fi saaminsa jala tursu baafatuun dalagaa diinummaa hojjata. Waggaa haaraa kana keessa karoora diinaa hunda burkuteessuu irratti ciminaan hojjatuun kan nu irraa eegamu dirqama lammummaa tahuu ABOn hiree kanaan yaadachiisa. Oromiyaan kan Oromoon keessatti badhaadhu, hojjatee jiraatu osoo hin taane kan keessatti hiyyoomee beelaan mankaraaruu fi keessaa baqachiifamu taasifamuu eenyuyyuu jalaa dhokataa miti. Diinummaa mootummaa kanaa caalaatti kan mirkaneessu tarkaanfii Oromiyaan alatti waggaa dhumate keessa raawwatamee dha.
Gochaan diinummaa ummata Oromoo irratti raawwatame kunis godaannisa yoomiyyuu hin dagatamne ummata Oromoo fi ummata Somaalee gidduutti uumee jira. Lammii bara rakkoo tahuu isaa roga arfan Oromiyaa irraa dirmatuufiin tokkummaa Oromoo caalaatti ittiin mirkaneesse. ABOn dirmatnaa lammiin lammii isaaf godhe dinqisiifataa akka itti fufuufis jajjabeessa. Lolli kunis akkuma olitti ibsuu yaalle hanga mootummaan Wayyaanee aangoo irra jiru kan dhaabbatu akka hin taane hubatamee, ummatni keenya kan ammaa caalaa of ittisuuf of ijaaruu fi of qopheessuu itti fufuun dirqama taha.
Oromiyaan alattis dargaggoota Oromoo barnootaaf biyya Wayyaanee Tigraay dhaqan irratti akkuma durii tarkaanfiin waggaa dabarsine keessa fudhatamaa ture mootummaan kun Oromoof naasuu kan hin qabnee fi dhabamsiisuu irraa boodatti kan hin deebine tahuu agarsiisa. Qeerroon Oromoo adda durummaa fi murannoon falmaa adeemsiseen ummata isaatti abdii horuutti dabalee akka isa cinaa hiriiru taasiseera.
Hidhaa fi ajjeechaaf osoo hin jilbeenfanne, wal gurmeessuu dhaan diddaan agarsiisaa jiru kan dargaggoo biroofis fakkeenya tahee dha. Haqa kana kan shakku yoo jiraate kan seenaa mootummoota cunqursitootaa fi abbootii irree hin beekne qofa. ABOn hiree kanaan mootummaan Wayyaanee ummata mohuu hin dandeenye lolaa akka jiru hubachiisaa, yoomiyyuu kan injifatu ummata haqa isaaf falmatu tahuu yaadachiisa.
Akeekni ummatni Oromoo qabsaawaafii jirus akka injifannoon gudunfamuuf ABOn karaa hundaan ummata waliin tahuu gadi faginaan hubachiisa.Oct 8, Naannoo, Bosonaa fi Jijjiirama Qilleensaa. Qindeessaa Misooma Naannoo Horsiisee Bulaa.
Ilma Abbaa Gadaa Bitootessaa hanga Bitootessaatti. Prees Sakreetariin hojii eegale.
Itti aanaa Bulchaa. Itti gaafatamaa Waajjira Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa. Itti gaafatamaa Waajjira Misoma Magaalaa fi Manneenii. Itti gaafatamaa Waajjira Barnootaa. Itti gaafatamaa Waajjira Eegumsa Fayyaa. Itti gaafatamaa Waajjira Abbaa Alangaa. Itti gaafatamaa Waajjira Bulchiinsaa fi Nageenyaa.
Itti gaafatamaa Waajjira Aadaa fi Tuurizimii. Itti gaafatamaa Waajjira Bulchiinsaa fi Itti fayyadama Lafaa. Itti gaafatamaa Waajjira Dhimma Hojjataa fi Hawaasummaa. Itti gaafatamaa Waajjira Daldalaa. Itti gaafatamaa Waajjira Abbaa Taayitaa Galiiwwanii. Itti gaafatamaa Waajjira Misooma Interpraayizii fi Industirii. Itti gaafatamaa Waajjira Dhimmoota Koomunikeeshinii Mootummaa. Itti gaafatamaa Waajjira Bulchiinsaa. Itti Aanaa Bulchaa. Itti gaafatamaa Waajjira Bulchiinsaa fi Nagenyaa. Itti gaafatamaa Waajjira Aadaa fi Tuuriizimii.Labsiin gibira galii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa lakk.
Labsiin gibira galii BMNO lakk. Labsii haaraa bulchiinsa taaksii MNO lakk. Hojii irra oolmaa labsichaaf karaa caasaa Abbaa Taayitaa Galiwwan Oromiyaa sadarkaa sadarkaan jiruu gita hawaasaa hundaaf sadarkaa sadarkaan kallattii garagaraatiin hubannoon ni uumama. Xiinxala dhiyaate kana irratti Abbaan Taayitaa Galiwwan Oromiyaa akkatuma duraan hojjataa tureen bara baajataa keessattis hojii galii idilee fi mana qopheessaa walitti qabuu ciminaan hojjachaa akka ture ibsameera.
Galiin walitti qabame kun galii bara baajataa tti sassaabamee irraa Birrii Bil. Obbo Abdisaa Addunyaa akkaa Abbaa Taayitaa Geejjiba Oromiyaatti dhimmota waraqaa hayyama konkolachisaa tiin wal qabatee jiruu sirreessuuf qorannaan akka xummuramee ibsuu dhan gahee hawasni taphachuu qabuu tarreessuun wal hubannaa fi tumsaan balka tirafikaa akka ittisnu waamicha dabarsaniruu. Hoji gaggeessaan ATGO damee kanaa Obbo Alamuu Kabbadaa akka himanitti bulchiinsi Laga xaafoo Laga daadhii magaalaa Finfinneetti dhiheenya waan qabuuf yeroo dheeraadhaaf daldala seeraan alaatiif saaxilamtee turte.
Akka isaan jedhanitti daldaltoonni gibira sirnaan kaffaluu hin barbaanne Finfinnee irraa yeroo hordofaman Xaafootti baqachuutu,Laga Xaafoo irratti yeroo hordoffiin jabaatu immoo Finfinneetti godaanuun gibira kaffaluu jalaa miliquu yaalu.
Kaffalaan gibiraa magaalattii biroon haasofsiifne Obbo Tashoomaa Baqqalaati. Tilmaama galii guyyaa adeemsisuuf qophiin barbaachisu xumuramaa jira. Naannoo Oromiyaatti bara kana tilmaama galii guyyaa adeemsisuuf qophiin barbaachisu xumuramaa jiraachuu Abbaan Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa marii tibbana magaalaa Adaamaatti godheen beeksise.
Bara bajataa kanatti galii idilee, mana qopheessaafi galii keessaarraa birr bil 17fi mil ol sassaabuuf akka karoorfame Abbaan Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa beeksise. Abbaa Taayitichaatti Daarektoreetiin Karoora,Hordoffii,Gamaaggamaafi Qoranoo obbo Kabbadaa Angaasaa tibbana ibsa kennaniin bara kana galii idilee birr bil 13fi mil fi mil 80galii mana qopheessaa birr bil 2fi mil fi mil 58 fi kuma fi kuma 81 akkasumas galii keessaarraammoo birr bili 1fi mil 10fi kuma sassaabuuf karoorfamuu himaniiru.
Humna raawwachiisummaa sektarichaa cimsuun galii dinagdeen naannichaa maddisiisu duguugamee akka sassaabamuufis bara kana hojjetoota 4,f leenjiin ni kennama. Biyyi keenya waggoota muraasa asitti dinagdee saffisaa ummanni sadarkaan irraa fayyadamu galmeessaa dhufteerti. Keessattuu waggoota kurnan asitti guddina dinagdee dijiitii lamaa walitti fufiinsaan galmeessaa dhufuushee ogeessoonni saayinsii dinagdee biyya keessaafi alaa mirkaneessaa jiru.
Hinyaadamus ture. Barnoonni gibiraafi taaksiis hawaasaaf bifa itti fufiinsa qabuun kennamaa jira. Rakkoowwan kanaafis sadarkaa olaanaatti kan gumaache hojiin komunikeeshiniifi barumsa kaffaltoota gibiraa sadarkaaa barbaadameen raawwatamuu dhabuusaa leenjii tibbana hojjetoota Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaafi itti aantota Hoji gaggeessitoota waajjiraalee damee godinaaleefi magaalotaaf kennamerratti ibsameera.
Haaluma kanaan yakka gibiraafi taaksiiratti raawwatamu xiqqeessuuf tarkaanfiiwwan barsiisoo fudhataman ifa gochuun ilaalchaafi gochaa kiraasassaabdummaarratti qabsoo maamilli ragaa bahuun geggeessuu,tooftaawwan hordofamuu qabanidha.
Kanaafis ijaarsa raayyaa bulchiinsa gibiraafi taaksii misoomawaa cimsuun amanataa lammiileen mootummaarraa qaban tajaajila faayidaa maamilaarratti xiyyeeffate kennuun murteessaadha. Maddoota galii naannicha keessatti argamanis adda baasuun kallattii labsii gibiraafi taaksii giddugaleessa godhateen dhaabbilee misoomaa mootummaa dabalatee qaamota gibiraafi taaksii kaffaluuf dirqama qaban hunda kaffalchiisuun akka qabamus ibsameera.
Keessattuu hubannoo hawaasa kaffalaa gibiraa guddisuuf hojii hojjetamurratti xiyyeeffachuun daldaltoota, gibiraafi taaksii haqummaan hin kaffallerratti tarkaanfii seeraa fudhachuun gibiraafi taaksii isaanirraa eegamu kaffalchiisuuf akka hojjetan dubbataniiru.
Bara bajataa kana galii birr bil Naannoo Oromiyaatti bara bajataa kanatti galii idileefi mana qopheessaarraa birr bil 10fi mil ol sassaabuuf akka karoorfame Abbaan Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa beeksise.
Abbaa Taayitichaatti Daarektoreetiin Karoora,Hordoffii,Gamaaggamaafi Qoranoo tibbana ibsa kenneen bara kana galii idilee birr bil 8 fi mil fi mil 80 akkasumas galii mana qopheessaarraa ammoo birr bil 2fi mil mil 70 fi kuma fi kuma 84 ol karoorfachuu beeksiseera. Humna raawwachiisummaa sektarichaa cimsuun galii dinagdeen naannichaa maddisiisu duguugamee akka sassaabamuufis bara kana hojjetoota kuma sadiitti siqaniif leenjiin ni kennama.
Kunis xumura bara karoora guddinaafi tiraanisfoormeeshiniitti lakkoofsa daldaltoota maashina gurgurtaa galmeessu fayyadamanii kuma 22fi rraan ni gaha. Widening revenue bases and implementing best technologies to excel revenue collection activities are the prevailing duties of tax collecting entity.
Tax frauds and evasions has become a trend among un loyal tax payerswho are aspired to accumulate illegal treasure obstructing societal development. Ato Assefa Defaro.
Fruit importers in germany
replies on “Gurmaa insa caasaa haaraa”
Gurmaa insa caasaa haaraa Powered by Aino.